XOG Waraysi Gabadh Soomaaliyeed oo Diinteeda Dooratay Markii Lagu Yiri caanimo iyo Diintaada Kala Dooro - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalXOG Waraysi Gabadh Soomaaliyeed oo Diinteeda Dooratay Markii Lagu Yiri caanimo iyo Diintaada Kala Dooro
XOG Waraysi Gabadh Soomaaliyeed oo Diinteeda Dooratay Markii Lagu Yiri caanimo iyo Diintaada Kala Dooro
January 16, 2021 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Wararka Maanta 0
Xaliima Aden, waxay ahayd gabadhii ugu horeysay ee iydaoo xijaaban sameysay xayeysiiska dharka. Bishii November ee sannadkii hore ayey ka baxday shaqadaas, waxayna sheegtay in aysan waafaqsanayen diinta Islaamka.
Halima, oo 23 sano jir ah, waxay ku nooshahay xaafadda St Cloud ee Minnesota, halkaas oo ah goobta ay ku barbaartay. Waa xaafadda ay deggan yihiin Soomaalida ugu badan ee Mareykanka. Marka ay halkaa joogto, waxay u lebisataa sida caadiga ah, mana marsato waxyaabaha la isku qurxiyo, waxayna si farxadleh u haysataa Eeygeeda, Coco.
Gabadhan oo ka dhooftay xerada qaxootiga ee Kakuma ee Kenya, oo ah halka ay ku dhalatay, farriimo ay soo dhigtay baraheeda Twitter iyo Instagram, bishii November, waxay ku sheegtay “in ay nafteeda ku dhaliileyso xoogga ay saartay fursadda ay ka heshay fashion-ka, ayna hilmaamtay wuxuu u horseedi karo.”
Musaveni oo markale ku guuleystay doorashada Madaxtinimada Uganda